Talenta afrikana : Hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny « Coke Studio Africa » i Wawa -
AccueilVaovao SamihafaTalenta afrikana : Hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny « Coke Studio Africa » i Wawa
Talenta afrikana : Hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny « Coke Studio Africa » i Wawa
17/10/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fampivondronana sy fifanakalozana. Hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny hetsika «Coke studio Africa » izay hotanterahina any Kenya i Joël Issoubaly Andriamahazo, fantatry ny maro amin’ny anarana maha-mpanakanto hoe Wawa. Tsy fifaninanana io hetsika io fa fampivondronana ireo kalaza eo amin’ny sehatry ny mozika aty Afrika. Firenena 16 no handray anjara amin’ny hetsika any amin’ny foiben’ny « Coke Studio Africa ». Ny orinasa Coca-cola no namolavola io hetsika io, ary natao hifampizara sy hanehoana, ary hampiroboroboana ny zava-kanto sy ny kolontsaina afrikana. Ankoatra ireo mpanakanto sangany avy amin’ny firenena samihafa, dia ho maromaro ihany koa ireo mpamokatra hiatrika izany hetsika izany. « Ny fahombiazana azony tamin’ny mozika novoiziny, ary ny fahamarianan-toeran’ny kanto nentiny no antony nisafidianana azy hiatrika io seho io », araka ny fanazavan’ny vondron’orinasa Star, solontenan’ny Coca-cola eto Madagasikara.
Ankoatra an’i Kenya, mpampiantrano sy Madagasikara, dia hanana mpanakanto kalaza hiatrika ity hetsika ity ihany koa i Afrika Atsimo, Rwanda, Angola, zimbabwe, Togo, Nosy Maorisy, Ouganda, Tanzania, Nigeria, Ghana, Mozambika, Repoblika Demokratikan’i Congo, Ethiopie ary Cameroun.
Hisy ny fanarahana mivantana ny fiainan’ireo mpanakanto mandritra ny 13 herinandro aharetan’ny hetsika. Afaka manaraka izany amin’ny fahitalavitra iray eto an-toerana isika eto Madagasikara. Mandritra izany dia hisy ny lalao mety ahazoana loka samihafa avy amin’ny mpanohana ny hetsika, ny orinasa Telma sy ireo manjifa ny vokatra Coca-Cola 30sl.
Teraka ilay nandrasan’ny besinimaro. Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika am-perin’asa, Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fomba ôfisialy omaly, tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina, ny firotsahan-kofidiana Filoham-pirenena. Tsy tonga irery nanatanteraka io lanonam-panambarana ôfisialy io ny tenany tamin’izany fa notronin’ny ...Tohiny